0 Sunday March 31, 2019 - 17:52:12
Jimcaale Yare waa mid ka mid ah dagaalyahannadii fuliyay weerarkii Inqimaasiga ahaa ee lagu qaaday dhismaha wazaaradaha shaqada iyo mida howlaha guud ee DFS.
0 Thursday March 28, 2019 - 11:09:01
Wilaayaadka islaamiga ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka jira horumar kala duwan oo aad u ballaaran kuwaas oo lagu helay ku dhaqanka Shareecada islaamka iyo iska caabinta Shisheeyaha duullaanka soo qaaday.
0 Tuesday March 26, 2019 - 20:16:42
Sheekh Cabdul Xaq Al Turkistaani oo ah Amiirka Xisbiga Islaamiga Turkistaanta Bari ayaa Jeediyay kalimad saameyn leh oo ku socota culimada islaamka iyo dhammaan muslimiinta.
0 Wednesday March 20, 2019 - 07:44:07
0 Wednesday March 20, 2019 - 06:48:47
0 Tuesday March 19, 2019 - 20:45:12
Munaasabad ballaaran oo lagusoo gunaanadayay machadka Shareecada ee Tacliimta sare ayaa lagu qabtay degmada Buula Fuulaay ee wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool.
0 Tuesday March 19, 2019 - 20:44:19
0 Friday March 15, 2019 - 19:30:37
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya xasuuq aan kala sooc laheyn oo gaalo xagjir ah u geysteen dad muslimiin ah xilli ay ku cibaadeysanayay masjid kuyaal wadanka New Zealand.
0 Thursday March 14, 2019 - 11:26:10
0 Tuesday March 12, 2019 - 21:27:53
Ciidamada Mareykanka oo ay wehlinayaan askarta Soomaalida calooshood u shaqeystayaasha ah ee loo yaqaano (Bankaraf) ayaa habeenkii xalay duullaan gaadmo ah ku qaaday degaanka Daarusalaam oo hoos taga degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose.
0 Saturday March 02, 2019 - 16:07:58
Idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay warbixin ay ka diyaarisay howlgalkii weynaa ee dagaalyahanada kooxdaas ay ku qaadeen Hotelka Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho iyadoona soo gudbisay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan howlgakaasi.
0 Wednesday February 27, 2019 - 21:10:51
0 Monday February 25, 2019 - 09:02:04
Ehellada dadkii ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ku xasuuqeen deegaan katirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbaahinta lahadlay waxayna faah faahiyeen qaabkii ay wax udhaceen.
0 Monday February 25, 2019 - 08:34:39
0 Sunday February 24, 2019 - 20:24:59
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM ayuu mareykanku ku sheegtay mas'uuliyadda duqeymo khasaara dhaliyay ee xalay ka dhacay Gobolka Sh/Hoose.
0 Sunday February 24, 2019 - 10:21:42
0 Thursday February 21, 2019 - 18:45:41
Dowladda Burundi ayaa wali uqeylla dhaaminaysa in qaar kamida ciidamadeeda aan laga saarin dalka Soomaaliya waxayna doonaysaa in ay lacago kusii qaadato ciidamadeeda calooshood ushaqeystayaasha ah.
0 Wednesday February 20, 2019 - 16:27:48
Markale mid kamida mas'uuliyiinta xukuumadda dabadhilifka imaaraatka carabta ayaa jeediyay hadal ka caraysiisay muslimiinta farxadna gelinayay quluubta gaalada meel walba oo ay joogeen.
0 Wednesday February 20, 2019 - 10:53:07
R/wasaaraha Itoobiya ayaa wada qaban qaabada kulankii ugu horreeyay ee uu isugu keenayo hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya.
0 Monday February 18, 2019 - 14:15:49
Dowladda Burundi ayaa ku guul darraysatay dadaallo ay ku doonaysay in qeyb kamida ciidamadeeda aan laga saarin dalka Soomaaliya oo ay duullaan ku joogaan.
0 Monday February 18, 2019 - 13:52:42
Hoggaamiyaha dowladda Melleteriga Masar ayaa ugu baaqay dowladaha Yurub in ay muslimiinta ku ciriiriyaan masaajidda si looga hortago wax uu ugu yeeray xagjirnimada oo uu ula jeedo baraarugga islaamiga ah.
0 Saturday February 16, 2019 - 11:44:45
Wargeyska Bloomberg ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa faafiyay warbixin ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin 4 kamid ah maal qabeenadii u dhashay wadanka Sucudiga ee loo xiray arrimaha l xiriira Musuq maasuqa kuwaas oo dhawaan lagusii daayey lacago madax furasho ah.
0 Thursday February 14, 2019 - 21:23:45
0 Wednesday February 13, 2019 - 10:52:47
Mujaahidiinta taabacsan Alqaacidda ee ka halgamaya mandiqadda saaxilka galbeedka qaaradda afrika ayaa sare uqaaday camaliyaadka jihaadiga ah oo ay ka fulinayaan dowladaha qeybta ah isbaheysiga saliibiga ah ee dowladda faransiiska hoggaaminayso.
0 Tuesday February 12, 2019 - 12:07:51
0 Monday February 11, 2019 - 08:23:10
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si adag uga hortagay weerar habeen dheelmad ah oo ay ciidamada dowladda Mareykanka ku qaadi rabeen degmada Janaale oo katirsan degmooyinka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayada.
0 Sunday February 10, 2019 - 21:06:35
Filim cusub oo ay soo saartay mu'asasada Alkata'ib ayaa muujinaya halaagga ciidamada shisheeye ku heysta dalka Soomaaliya oo ay duullaan ku joogaan wax kabadan 11 sanadood.
0 Thursday February 07, 2019 - 07:36:39
« Prev1 ... 6789101112 ... 42Next »